« Hebreo 12 [MDG - malagasy] »
12:1 Koa amin’izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany koa manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hihazakazaka amin’ny faharetana amin’izao fihazakazahana napetraka eo anoloantsika izao,
12:2 Mijery an’i Jesosy Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy, Izay niaritra ny hazofijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin’ny ankavanan’ny sezafiandrianan’Andriamanitra Izy.
12:3 Fa hevero tsara Ilay naharitra ny fanoherana nataon’ny mpanota taminy, fandrao ho ketraka ianareo, ka ho reraka ny sainareo.
12:4 Ianareo tsy mbola nanohitra niady tamin’ny ota hatramin’ny fahalatsahan-dra.
12:5 Ary hadinonareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin’ny zanaka hoe: “Anaka, aza atao tsinontsinona ny famaizan’i Jehovah, ary aza reraka, raha anariny ianao,
12:6 Fa izay tian’i Jehovah no faiziny, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny.
12:7 "Fa raha famaizana no iaretanareo, dia mitondra anareo tahaka ny zanaka Andriamanitra; fa aiza moa izay zanaka tsy faizin-drainy?"
12:8 "Fa raha tsy faizina tahaka ny itondrana azy rehetra ianareo, dia zazasary, fa tsy zanaka;"
12:9 "Ary koa, isika dia nanana ny rain’ny nofontsika ho mpanafay antsika ka efa nanaja azy; tsy mainka va ny hanekentsika ny Rain’ny fanahy, ka ho velona isika?"
12:10 "Fa ireny dia nanao izay hahafay antsika tokoa tamin’ny andro vitsy araka izay nahafaly azy, fa Izy kosa dia ny hahasoa mba handraisantsika anjara amin’ny fahamasinany;"
12:11 "Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao ho mahafaly andro anaovana, fa mampahory; fa rehefa afaka izany, dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an’izay nanaovana azy izy."
12:12 "Koa atanjaho ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy;"
12:13 Ary manaova lala-mahitsy alehan’ny tongotrareo, mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa, fa ny mba hahasitrana azy kosa.
12:14 "Miezaha mitady fihavanana amin’ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo."
12:15 "Ary mitandrema tsara, fandrao hisy hiala amin’ny fahasoavan’Andriamanitra; fandrao hisy faka mangidy mitsimoka hampikorontana anareo, ka ho voaloto ny maro;"
12:16 Fandrao hisy mpanao fahavetavetana, na olona tsy manaja ny masina, dia tahaka an' i Esao, izay nivarotra ny fizokiany hahazoany hanina indraim-bava.
12:17 "Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha te-handova ny fitahiana izy, dia nolavina; fa tsy nahita izay hibebahana izy, na dia nitady fatratra tamin’ny ranomaso aza."
12:18 Fa ianareo tsy mby eo amin’izay tendrombohitra azo tsapaina sady mirehitra afo, dia eo amin’ny fahamaintisana sy ny haizina sy ny tafio-drivotra,
12:19 Sy ny fanenon’ny trompetra ary ny feon’ny teny, ka izay nandre izany feo izany dia nitalaho mba tsy havantana aminy intsony ny teny.
12:20 (Ary tsy zakany izay nandidiana azy, fa raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra, dia hotoraham-bato izany, na hotifirina amin’ny zana-tsipìka:
12:21 Ary satria loza indrindra ny fahitana, dia hoy Mosesy: “Matahotra loatra sy mangovitra indrindra aho:”
12:22 Fa ianareo kosa efa mby eo an-tendrombohitra Ziona, tanànan’Andriamanitra velona, dia Jerosalema any an-danitra ary ao amin’ny antokon’ny anjely tsy omby alinalina,
12:23 Ary amin’ny fihaonambe sy ny fiangonan’ny lahimatoa voasoratra any an-danitra sy amin’Andriamanitra, Mpitsara ny olona rehetra, ary amin’ny fanahin’ny olona marina izay efa natao tanteraka,
12:24 Sy amin’i Jesosy, Mpanalalana amin’ny fanekena vaovao, ary amin’ny rà famafazana, izay miteny tsara lavitra noho ny an’i Abela.
12:25 Tandremo mba tsy holavinareo izay miteny. Fa raha tsy afa-nandositra izy ireo tamin’ny nandavany ilay niteny tety ambonin’ny tany, mainka fa isika raha miodina miala amin’Ilay miteny avy any an-danitra,
12:26 "Izay nampihorohoro ny tany fahiny tamin’ny feony; fa ankehitriny Izy efa nampanantena hoe: Indray maka koa tsy ny tany ihany no ampihorohoroiko fa ny lanitra koa.”"
12:27 Ary ny hoe: “Indray maka koa” dia manambara ny hanafoanana izay zavatra ampihorohoroina, toy ny zavatra natao, mba hitoeran’izay zavatra tsy ampihorohoroina.
12:28 "Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampihorohoroina isika, dia aoka isika hanana fahasoavana hoentintsika manao izay fanompoana sitrak’Andriamanitra amin’ny fanajana sy ny fahatahorana an’Andriamanitra;"